७ नव-एमाले मन्त्रीको पद खोसिन सक्ने ! - Kantipath.com
७ नव-एमाले मन्त्रीको पद खोसिन सक्ने !
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार शपथ लिँदा ‘प्रतिज्ञा गर्छु’ भन्ने शब्द छुटाएकाले पुनः शपथ गराउन अन्तरिम आदेशको माग गर्दै रिट निवेदन पेश भएको छ । ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतले प्रधानमन्त्री नियुक्त भइ शपथ लिने क्रममा ओलीले सोमबार राष्ट्रपतिलाई ‘त्यो पर्दैन’ भन्दै विवादस्पद शपथ लिएका थिए।
माओवादीबाट एमाले छिरेका सातजनालाई प्रधानमन्त्री ओली सोमबार फेरि सोही धाराअनुसार मन्त्री बनाएपछि संवैधानिक प्रश्न उठेको छ। माओवादीबाट आएका टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु शाह, गौरीशंकर चौधरी, दावा तामाङलगायतलाई ओलीले फेरि मन्त्री नियुक्त गरेका छन्। निवेदकहरुले संविधानको ठाडो उल्लंघन भएको भन्दै त्यसलाई बदर गर्न माग गरेका छन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली, अधिवक्ताहरु लोकेन्द्र ओली, सन्तोष भण्डारीलगायतले तीनवटा रिट निवेदन पेश गरेका हुन्। सबै प्रशासनिक काम सकिए पनि आइतबार समय अभावका कारण निवेदन दर्ता हुन नसकेको ज्ञवालीले जानकारी दिए।
Previous Previous post: ६.१ म्याग्नीच्यूडको भूकम्प
Next Next post: चन्द्रागिरि नगरस्तरीय आइसोलेशन सेन्टरहरू सञ्चालन